ရွာဆူပြီ !!! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရွာဆူပြီ !!!
Posted by alinsett on Dec 15, 2014 in Creative Writing, Critic, My Dear Diary | 42 comments
မောင်သူရကြီးက ဗမာပီပီ. . .
ရေနွေးကြမ်းလေးနဲ့ လက်ဖက်သုပ်လေးနဲ့ သိပ်ကြိုက်တာပေါ့။
( စကားမစပ် . . .သူကြီးရေ. . . လက်ဖက်သုပ်နဲ့ရေနွေးကြမ်းဆိုတာ ဗမာရိုးရာအစားအသောက် စစ်/မစစ် ဗဟုသုတ ပေးပါဦး)
မောင်သူရ ကြိုက်တဲ့ လက်ဖက်သုပ်ဆိုတာက လက်ဖက်အညွန့်လေးတွေများများနဲ့ ခါးသက်သက်ဆိမ့်ဖန်ဖန် လက်ဖက်သုပ်လေ။
အံမယ် ပုဇွန်ခြောက်လေးကလည်း နီနီတွတ်တွတ် ပါဦးမှဗျားးး။
လက်ဖက်ညွန့်လေးတွေကို မိုးကုတ်မြို့က သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေက မကြာခဏပို့ပေးပါရဲ့။
ဒါပေမယ့်. . .
ဒီက ပဲခြမ်းကြော်တွေနဲ့ သိပ်မလိုက်ဘူးဗျ။
အဲ မိုးကုတ်က လက်ဖက်အညွန့် နှပ်ပြီးသားလေးတွေနဲ့လိုက်တာကတော့ ယုဇန လက်ဖက်ထဲက အကြော်စုံဗျ။
သူကျ ကြွပ်ရွနေတာလေးက သူများနဲ့ မတူဘူး။ တမူထူးနေသလားလို့။
မိုးကုတ်က ပို့ပေးတဲ့ လက်ဖက်ညွန့်လေးတွေနဲ့ ယုဇနအကြော်စုံနဲ့ ပေါင်း သုပ်လိုက်တော့ အရသာက ထူးသမှ ထူးဗျားးးး။
(ဒီလိုပြောတော့ ယုဇန လက်ဖက်လုပ်ငန်းက ကြော်ငြာခ ပေးထားတယ်ထင်နေပါဦးမယ်။ မဟုတ်ရပါဘူး။)
အဲ့ဒီ လက်ဖက်သုပ်နဲ့ (မိုးကုတ်ကပို့တဲ့)လက်ဖက်ခြောက် မွှေးမွှေးလေးကို ကျိုချက်ခတ်ထည့်ထားတဲ့ ရေနွေးကြမ်း ဖန်ဖန်မွှေးတေးတေး
ပေါင်းပြီး စားလိုက်/သောက်လိုက်တာ. . .
နတ်စည်းစိမ် သိကြားစည်းစိမ်ကို (မခံစားဖူးပေမယ့် စိတ်မှန်းနဲ့)
မလဲနိုင်ဘူးဗျို့. . .
(လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်နေကျဆိုတော့ ဆိုင်မှာ သောက်တဲ့ ရေနွေးကြမ်း မကောင်းမကန်း အဖြစ်တညစ်ကို သောက်မိတိုင်း. . .) လက်ဖက်ခြောက် ကောင်းကောင်းမွှေးမွှေးလေးတွေနဲ့ ကျိုထားတဲ့ မိုးကုတ်လက်ဖက်ခြောက် ခတ်ထားတဲ့ရေနွေးကြမ်းလေးကိုသတိရမိတယ်။
အဲ ပြောနေရင်းနဲ့တောင် ရွာဆူပြီဗျို့. . .
ရွာ ဆူတယ်ဆိုလို့ ဂဇက်ရွာကြီး ဆူလေပြီ မထင်နဲ့ဦးမိတ်ဆွေတို့. . .
ဒီလို ဒီလိုဗျ. . .
ဟောဒီ မောင်သူရက လက်ဖက်ခြောက် မွှေးမွှေးဖန်ဖန်လေးနဲ့ ကျိုထားတဲ့ ရေနွေးကြမ်းကို
လက်ဖက်ခြောက်မွှေးမွှေး ဖန်ဆိမ့်သက်သက် အရသာလေးကို ပူပူလောလော သောက်မိတိုင်း မောင်သူရကြီးနေခဲ့တဲ့ ရွာကို သိပ်သတိရတာဗျ။
”ရွာ”ရယ်လို့ အလွမ်းပြေ အမည်မှည့်ထားတာ။
အဲအဲ အခု ပြောနေရင်နဲ့ကို မောင်သူရကြီး ကျိုထားတဲ့
”ရွာ” ဆူနေပြီဗျို့. . .
၂၀၁၄၊ ဒီဇင်ဘာ ၊ ၈
ငါသုတ်စားတဲ့လက်ဖက်သုပ်က တစ်မျိုး နောက်မှ ပို့စ်တင်လိုက်ဦးမယ်
ဂါးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး တကတဲ ရေနွေးကြမ်းရေးဒါမြန်းအေ ငါ့အဟုတ်မှတ်လို့ အပြေးအဖြန်းလာဒါ ခလုတ်တိုက်လို့ခေါ်လဲဒူးကွဲ မှောက်ရက်လဲပါကောလား။ နင့်ဟာတကယ်ရွာဆူဒါမှမဟုတ် ရွာတကယ်ဆူအောင် ဆိုင်းဘုတ်ထောင် ဒဂျီးကို ဆန်ဒပြမယ် ပွိုင့်များများတိုးရေးဒို့အရေး
ကျနော့်ရဲ့ တကယ့်ရွာလေးက တကယ် ဆူသွားတာဗျ။
ရွာဆူအောင်.. နယ်စည်းမခြားအဖွဲ့အတွက်လည်း.. ပုလင်းဝယ်ပြီးပြီ..။
…. အနံ့မထွက်တဲ့.. ဗော့ကာ..။
ရွာကာလသားအုပ်စုမူးရင်.. တအိမ်တက်စေ့.. ပြဿနာရှာကြမယ်.. လို့..။
ကယ်ပါ.. ကယ်ပါ.. ကယ်ကြပါ၏..။
ကြားသာကြား မကြင်ရ တော့ လုပ်ပြီ။
လူကြုံမရှိရင်.. DHL ရှိတယ်..
ဂလောက် ခန ခန ဆူတဲ့ဟာဂျီးမြန်းးး
နာတို့ ရွာလေးမြန်း ကြည့်။
တဂျီးကို ချစ်ကြောက်ရိုသေ ငြိမ်ဝပ် ပိပြားနေကြတာပဲ။
တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ ရေနွေးအကြိုက်ဆုံးလို့ ကြားဖူးတယ်….။
သူရို့…ရေနွေးကြိုပုံ၊ လက်ဖက်ခြောက်ခတ်ပုံ၊ သောက်ပုံတွေ တစ်ခါလား ဖတ်ရပေမယ့်…ခုတော့ မေ့သွားပြီ….။
အင်း….ကောင်းကင်ပြာလဲ…အရင်က ရေနွေးကြမ်းဆိုတာ မသောက်ဖြစ်ပေမယ့်….
ကောင်းကင်ပြာ ရေနွေးကြမ်း ကြိုက်တတ်နေတာကို…
ကာတာရောက်မှ တဆောင်ထည်းနေ အိန္ဒိယကုလားတွေဆီက နည်းတခုရထားသဗျ။ လက်ဖက်ခြောက်နဲ့အတူ ပူစီနံ အရွက်လေးတွေထည့်ခပ်သောက်ကြည့်။ တော်ယုံမကောင်းတဲ့ လက်ဖက်ခြောက်တောင် အရသာပိုကောင်းသွားသဗျ။ အရင်အဆောင်တုံးကတော့ စိုက်စရာမြေလေးရှိလို့ ပူစီနံအခင်းစိုက်ထားပြီး ရေနွေးကြမ်းသောက်တိုင်းခတ်သောက်ဖြစ်တာ။ အခုအဆောင်တော့ မြေပိုမရှိလို့ ရေသန့်ဘူးအလွတ်ထဲထည့်စိုက်ရမယ်ထင့်။ စမ်းကြည့်ပါလေ။
ပူစီနံက.. အစားအသောက်.. အချိုရည်.. အိုက်စ်ကရင်တွေမှာ.. မင့်..ပူမွှေးနံ့လေးအပြင်..အစိမ်းရွက်လှလေးမို့.. တန်ဆာဆင်သုံးတာ..။
ပြီးခဲ့တဲ့တပါတ်က.. စူပါမားကက်က.. စတားဘတ်တကပ်ဝယ်လာတာမှာ.. ကော်ဖီထဲပက်ပါးမင့်(peppermint)ထည့်ထားသဗျ..
နောက်ဆို.. ဆူရင်ပူစီခပ်ကြနော..။ ကျမ်းမာရေးညီညွှတ်သတဲ့..။
ဗမာပြည်မှာက ပူစီနှစ်မျိုးကလည်း ရှိသေးဆိုတော့
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်ကတော့ ပူစီနံကို မွှေးတယ်လို့သာထင်
ရေနွေးကြမ်းထဲတော့ အခုမှ စမ်းကြည့်ရမယ်။
ကြည့်ရတာ. Cat Woman ကြည့်ပြောတာလားမသိ..
Woman Pussy လို့.. Google Image search စေလို…။
Internet Search Engine တွေ မှာ ရှာတိုင်း ကောင်းတာ မဟုတ်မှန်း သိရက်ချွန်တယ်ဗျို့။
ကိုယ်ရှာသမျှ ကို နောက်က လိုက်ကြည့် နေနိုင်တာ သိရက်ကိုများ။
အဲဒီမှာ အဓိက အကြမ်းဖက် မှု စာလုံးပါလို့ ကတော့ မသကာင်္ ရင် FBI လာတာဘဲ မဟုတ်လား။
မြန်မာပြည်က ပိုပြီး ဟောင်းလောင်းပွင့်နေတာ မှ ဘယ်နေရာ က ဘာကို Browse နေတယ်တောင် သိနိုင်ဆိုဘဲ။
ဆရာ့ ဆရာကြီး တွေ ပြောတာဘဲ။
ရန်ကုန်မှာ ကန်ဘောင်ဘေးတို့ ဘာတို့မှာ မတ်တပ်ရပ်နေပြီး
မျက်စပစ် ပစ်ပြတတ်တဲ့ မမတွေကို ဗန်းစကားနဲ့
ယူအက်စ် အန်အက်စ်အေ က.. တကမ္ဘာလုံးရဲ့.. တက်သမျှအကုန်. .ကြည့်နေနိုင်တာဗျ..။
သတိထားဖို့က.. အင်တာနက်ဆိုတာကြီးနဲ့.. ကွန်ပြူတာဆိုတာကြီးက.. သူတို့တီထွင်ထားတာလေ…။
.ရွာဆူပြီ ဆိုလို့ တစ်ကယ်လားလို့ တစ်ကယ်တော့ ရွာ ဆူတာကိုး…
.စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေမှာဆို ရေနွေးကြမ်းက ဝယ်သောက်ရတော့တဲ့ အမျိုးဖြစ်သွားပီ…
.ဟိုတယ် Park Royal မှာ ရေနွေးကြမ်းဝိုင်းအတွက် တရုတ်ပညာရှင်သီးသန့်ငှားထားရတာတဲ့…
.သူတို့ ရေနွေးကြမ်းက ပန်းကန်ထဲမှာ လက်ဘက်ခြောက်နဲ့ တစ်ခြားသီးပွင့်ခြောက်(ဂန္နမာပန်း၊ ဇီးသီး၊ လိုင်ချီးသီး၊ မုန်လာဥ၊ဂေါ်ဖီ၊ နောက်ဘာသီးမှန်းမသိတဲ့ နီနီသီးလေး) ထည့်ထားပီး ရေနွေးဖြူ ထည့်ရတာ..ရေနွေးကရားနှတ်သီးရှည်ကြီး ကို ပုံစံမျိုးစုံ အိုက်တင်ပေးလို့ ထည့်ပေးတာ …
သူကြီးလို comment ထဲမှာ ပုံလေးတင်ပေးလို့ရရင်ကောင်းသား…
အဲဒါ အန်တီအိရေ အဲ့ဒါ
အခုမှပဲ ရွာဆူအောင် ဆန်ဒပြရမယ့်အချက် တွေ့သွားပြီ
သဂျီးလို comment ထဲ ပုံထည့်ပြလို့ ရရေး ဒို့အရေးး
အနီရောင် တီရှပ် ထပ် ထုတ်မယ်
မြို့တော်ခန်းမ အပေါက်ဝမှာ လူစုပြီး ပြကြမယ်
အမှန်တော့ ရွာက အမြဲဆူနေတာ ခုမှ ဆူမယ်ဆိုရင် မဆန်းတော့ဘူးလို့ အဲ့လာ ဝင်ပြောတာ… မောင်သူရ
ခေါင်းစည်းကြောင့် လန် ့သွားပါကြောင်း
လက်ဖက် ညွှန် ့ကြိုက်ချင်းတော့ တူနေပါကြောင်း
ရေနွေးကြမ်းကို ရှမ်းပြည်မှာ အခါးရည် ဟူ၍ ခေါ်ပါကြောင်း
မြေအိုး နဲ့ ရွာ က မှ သောက်လို့ အကောင်းဆုံးဗျ ။
အဲ့သလို ရွာဆူနေတုံး ရေနွေးအိုးဖင်ကို လက်နဲ့ကိုင်ရင် မပူဖူးဗျ…..
ကျနော့်ရှေ့မှာ ထပ် စမ်းပြမလား???
အဲဒီ အရမ်းကောင်းတဲ့ ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ အရွက်ရဲ့ နာမည်က
ဦးပါ လာမှပဲ ဒီအရွက် အမည်မှန် နေရာမှန် ပြန်ရောက်ရှာတယ်
နမိတ်များဖတ်ရော့တလား အောင်သျဲလင်းရယ်…………. :'(
နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူက အောင်ယဲလင်းမြန်းလား??
ဘိုလိုဂဘိုလို ခေါင်းစဉ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်သွားတယ်မသိ။
နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်ဖို့. . .
ကျနော့်မှာ . . . ”လက်”
အဲဒါလေး ပြောချင်လို့ ဝင်လာတာ ကိုယ့်အရင် ပြောတဲ့သူတွေ ရှိနေပြီ။
ဘာပဲပြောပြော မုန်တိုင်းစဲသွားတဲ့ ကောင်းကင်ဟာ အကြည်လင်ဆုံးပါပဲ။
(မုန်တိုင်းကလည်း ခဏခဏ တိုက်တာခက်စ်)
ရွာစည်ပြီ ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ် တပ်ဦးမှပါ
ကျနော် ပြောသလိုဖြစ်ဖို့ လျှာစက်အာစက် သွားတပ်လိုက်ဦးမယ်
ရေနွေးကြမ်းကတော့.. စိနပြည်သား… စစ်စစ်..။